အိမ်တွင်းလေထု ကို ဘာတွေကများ ညစ်ညမ်းစေတာလဲ……… - Hello Sayarwon
လေထု ညစ်ညမ်းတာက ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေအိမ်ထဲမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုက လေထုညစ်ညမ်းတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်တာပါ။ အိမ်ထဲအထိတော့ မဖြစ်ပါဘူးလို့ တွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ လေထုညစ်ညမ်းမှုက နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းလေထု ကလည်း ညစ်ညမ်းနိုင်ပါတယ်။
လေထုညစ်ညမ်းတာက လူသားတွေနဲ့ သက်ရှိတွေရဲ့ သက်တမ်းကို တိုစေပြီး ရောဂါတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းတာက အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာ တတိယအကြီးဆုံး အသက်တိုစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းပါ။ အဓိကကတော့ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းလို့ မဟုတ်ဘဲ နေအိမ်ထဲမှာတင် လေထုညစ်ညမ်းနေတာကြောင့်လို့ စစ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။
ဒါဆို မေးစရာရှိလာနိုင်တာက လေထုကို အဓိက ညစ်ညမ်းစေတာက စက်တပ်ယာဉ်တွေနဲ့ စက်ရုံတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူးလားလို့ပေါ့။ တကယ်ကတော့ အိမ်ထဲမှာလည်း လေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့အရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေက ဘာတွေများလဲ ……
ဘာတွေကများ အိမ်တွင်းလေထုကို ညစ်ညမ်းစေတာလဲ………
အိမ်တွင်းလေထု ကို ညစ်ညမ်းစေတဲ့ အရာတွေက အခြား မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အသုံးပြုနေတဲ့
အခြားသော အိမ်တွင်းသုံး အမွှေးနံ့ပါတဲ့ သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းတွေပါ။ ဒါတွေက အိမ်တွင်းက လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တွင်း လေထု ညစ်ညမ်းမှုက ဘယ်လိုရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်သလဲ……….
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အနံ့အသက်တွေက အိမ်တွင်းလေထု ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို အာရုံကြောစနစ်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကို ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ဓာတ်မတည့်မှုကို ခံစားရနိုင်သလို မျက်လုံး၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း နဲ့ အရေပြား ခြောက်သွေ့တာ၊ ဓာတ်မတည့်တာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူတာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်တာ၊ ထိခိုက်လွယ်တာ၊ ထိပ်ကပ်နာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ အဆုတ် ထိခိုက်တာ၊ နှာချေတာမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ အဆုတ်ကင်ဆာကို ခံစားရနိုင်တာပါ။ လေထု ညစ်ညမ်းမှုက လူတွေ နဲ့ သက်ရှိတွေရဲ့ သက်တမ်းကို တိုစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချဖို့ လိုပါမယ်။
အိမ်တွင်းလေထု ညစ်ညမ်းမှုကို ဘယ်လို လျှော့ချမလဲ……….
အိမ်တွင်းက လေထု ညစ်ညမ်းမှုကို ဒီလို လျှော့ချပါ။
အပင်တွေ စိုက်ပါ။ အိမ်တွင်းမှာ စိုက်လို့ရတဲ့ အပင်မျိုးတွေပါ။
လေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့အရာတွေ အသုံးပြုမှုကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချပါ။
နေအိမ်ကို ပုံမှန် သန့်စင်ပါ။ ဖုန်စုပ်ပါ။
မီးသွေး၊ ထင်းတို့လိုမျိုး လောင်စာတွေကို အသုံးပြုမှုကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ချပါ။
လေစစ်ထုတ်တဲ့ လေစစ်ဇကာတွေကို သန့်စင်ပါ။
ဒီလိုလေးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးရင်း လေထုကို သန့်စင်ပြီး နေ့စဉ်ဘဝကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။
https://www.airsolutionssc.com/article/5-common-symptoms-of-poor-indoor-air-quality-in-your-home Accessed Date 31 August 2021